प्रमुख निर्वाचन आयुक्तको प्रश्नः प्रदेशसभाको नतिजा कहाँ बुझाउने ? – Himalaya TV
Home » समाचार » प्रमुख निर्वाचन आयुक्तको प्रश्नः प्रदेशसभाको नतिजा कहाँ बुझाउने ?
प्रमुख निर्वाचन आयुक्तको प्रश्नः प्रदेशसभाको नतिजा कहाँ बुझाउने ?
१९ पुष २०७४, बुधबार १९:२३
काठमाण्डौ, १९ पुस । प्रमुख निर्वाचन आयुक्त डा‍. अयोधीप्रसाद यादवले निर्वाचनको नतिजा घोषणा गर्ने विषयलाई जोडेर संवैधानिक निकाय निर्वाचन आयोगमाथि अनेक किसिमका लाञ्छना लगाउने कार्य तत्काल बन्द गर्न राजनीतिक दल र उनीहरुको भ्रातृ संगठनलाई आग्रह गरेका छन्।
नेकपा एमालेका भ्रातृ संगठन अखिल नेपाल महिला संघका अध्यक्ष गोमा देवकोटाको नेतृत्वमा रहेको प्रतिनिधिमण्डलले प्रस्तुत गरेको ज्ञापनपत्र बुझ्दै प्रमुख आयुक्त डा. यादवले आयोगको छविलाई धुमिल र कमजोर बनाउने काम नगरिदिन राजनीतिक दल र तिनका भ्रातृ संगठनको ध्यानाकर्षण गराए।
प्रमुख निर्वाचन आयुक्त डा. यादवले भने, “प्रदेशसभाको निर्वाचनको नतिजा कहाँ बुझाउने ? प्रदेश प्रमुख खोइ ? निर्वाचनको परिणाम आउनेबित्तिकै किन आत्तिनुभएको ? पवित्र उद्देश्यले संविधान र कानूनअनुसार काम गरेको संस्थामाथि लाञ्छना लगाउनु भनेको आपत्तिजनक विषय हो।”